Sacuudi Carabiya oo ku dhowaaqday maalinta ugu horreysa ee bisha Ramadan - Caasimada Online
Home Warar Sacuudi Carabiya oo ku dhowaaqday maalinta ugu horreysa ee bisha Ramadan
Sacuudi Carabiya oo ku dhowaaqday maalinta ugu horreysa ee bisha Ramadan
Muqdisho (Caasimada Online) – Boqortooyada Sacuudiga ayaa goordhoweyd xaqiijisay in maalinta berri ah ay tahay maalinta koowaad ee bisha Ramadaan, ayada oo meelo kala duwan oo Sacuudiga ah laga arkay bisha.
Kadib warka kasoo baxay Sacuudiga ayaa waxa caawa si rasmi ah taraawiixda looga bilaabaya Xaramka, bacda salaada Cishaa’i.
Dalal uu kamid yahay Sacuudiga ayaa bilaabay galabtii raadinta dhalashada bisha Ramadaan ee sanadkan 1443 Hijriyadda, iyada oo xiligaas ay dalbadeen in la baadi goobo bisha.
Sacuudiga ayaa hore ugu diiwaan-geliyay jadwalka Ummul-Qura in bisha Shacbaan ay dhalatay Khamiistii 3/4/2022-ka Miilaadiga, ayna maanta tahay 29-ka Shacbaan, midaasi oo waajib ka dhigeysay in la baaro bisha Ramadaan, oo goordhoweyd si rasmi ah loo xaqiijiyay.
Dhamaan bahda Caasimada Online waxay curashada bisha barakeysan ee Ramadaan ugu hambalyeynaysa dhamaan umadda Muslimka ah, gaar ahaan bulshada Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogan.